Ny Rafi-pitondratena: Ny fomba amam-pahefana ao amin'ny kaongresy
Ny fiantraikan'ny rafitra momba ny zokiolona amin'ny asan'ny Kongresy
Ahoana ny fametrahana fahefana ao amin'ny kaongresy
Ny fehezan-teny hoe "rafitra zokiolona" dia ampiasaina mba hamaritana ny fampiharana ny tombontsoa manokana sy tombontsoa manokana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena sy solontenan'i Etazonia izay nanompo ela indrindra. Ny rafitra momba ny zokiolona dia lasibatry ny hetsika fanavaozana marobe nandritra ny taona maro, izay tsy nahasakana ny mpikambana ambony tao amin'ny Kongresy tsy nahazo hery mahery vaika.
Tombontsoa ho an'ny mpikambana taloha
Ny mpikambana manana laharam-pahamehana dia avela hisafidy ny biraony sy ny andraikitry ny komity.
Ity farany dia iray amin'ireo tombontsoa tena manan-danja izay azon'ny mpikambana ao amin'ny kaongresy mahazo satria ny kaomity dia ny ankamaroan'ny asa mpanao lalàna manan-danja indrindra , fa tsy ao amin'ny tranon'ny House sy ny Sénat.
Ireo mpikambana manana tolotra maharitra mandritra ny komity dia heverina ho ambony ihany koa, ary noho izany dia manana fahefana bebe kokoa ao amin'ny komity izy ireo. Ara-dalàna ihany koa ny zokiolona, ​​saingy tsy voatery foana, raha raisina ho filaharan'ny komity mpanohana ny komity tsirairay, ny toerana ambony indrindra amin'ny komity.
Ny rafitra zokiolona ao amin'ny Kongresy dia tamin'ny taona 1911 ary fikomiana tamin'ny House Speaker Joseph Cannon, manoratra Robert E. Dewhirst ao amin'ny Encyclopedia an'ny Kongresy Amerikana. Efa nisy ny rafitra fiasan'ny zokiolona, ​​saingy i Cannon kosa dia nampiasa hery goavana, ka ny ankamaroany dia mifehy ny antontam-bola rehetra izay tokony hampidirina ao amin'ny trano.
Nitarika ny fiaraha-mientana fanavaozana ny Repoblika 42 avy amin'ny Repoblika, ny solontenan'i Nebraska, George Norris, dia nametraka fanapahan-kevitra izay hanaisotra ny Filoha avy ao amin'ny Kaomisionan'ny Fitsipika, izay manala azy tanteraka ny fahefana rehetra.
Raha vao noraisina dia navelan'ny rafi-pandraharahana ny mpikambana ao amin'ny Trano mba handroso sy handresy ny fanendrena komity, na dia manohitra azy ireo aza ny mpitarika ny antokony.
Ny vokatr'io rafitra fanabeazana io
Ireo mpikambana ao amin'ny kaongresy dia mankasitraka ny rafi-piasan'ny zokiolona satria hita ho fomba fisainana tsy mifanaraka amin'ny fisafidianana ireo filohan'ny komity, raha tsy mifanohitra amin'ny rafitra iray izay mampiasa ny fitantanana, ny fanavakavahana ary ny fankasitrahana.
"Tsy tia ny zokiolona intsony ny Kongresy," hoy ny mpikambana iray tao an-trano avy any Arizona, Stewart Udall, indray mandeha, "fa ny safidy hafa."
Ny rafitra seniority dia manatsara ny herin'ny sezan'ny komity (voafetra eo amin'ny enin-taona hatramin'ny taona 1995) satria tsy voatery ho an'ny tombotsoan'ny mpitarika antoko. Noho ny toetoetran'ny fe-potoam-piasana, ny laharam-pahamehana dia manan-danja kokoa ao amin'ny Antenimieran-doholona (izay misy ny fehezan-dalàna mandritra ny enin-taona), noho ny ao amin'ny Tranoben'ny solontenany (izay misy roa taona monja ny fepetra).
Ny sasany amin'ireo toeran'ny mpitarika matanjaka indrindra-mpandahateny ao amin'ny Trano sy ny mpitarika maro an'isa-dia voafidy toerana ary noho izany dia somary miadana amin'ny rafitra zokiny.
Ny zandriny koa dia manondro ny maha-olona ara-tsosialy ny mpanao lalàna ao Washington, DC Ny fotoana nahamety ny mpikambana dia ny toerana misy ny birao ary ny azo inoana kokoa fa izy dia asaina hanatrika antoko lehibe sy ireo fiaraha-mientana hafa. Satria tsy misy fetran'ny fe-potoana ho an'ny mpikambana ao amin'ny Kongresy , izany dia midika fa ireo mpikambana manana laharam-pahamehana dia afaka, ary manao, manangona fahefana be sy hery be dia be.
Ireo mpanohitra ao amin'ny rafitra zokiolona ao amin'ny Kaongresy dia milaza fa manome tombony amin'ireo mpanao lalàna avy amin'ny distrika "azo antoka" (izay manohana ny antoko politika iray na ny iray hafa ny mpifidy) ary tsy voatery hiantoka fa ny olona tena mahay indrindra dia ho seza.
Ny zava-drehetra dia natao hamaranana ny rafi-piasan'ny senatera ao amin'ny Antenimiera, ohatra, dia fifidianana maro samihafa no manamarina ny fanitsiana ny fepetra. Ary indray, ny fahafahan'ireo mpikambana ao amin'ny Kongresy mifidy ny hampihenana ny azy dia tsy misy na inona na inona.
Ireo firenena izay mahalasa sigara Marijuana dia ara-dalàna
Ireo manampahefana ao amin'ny governemanta izay mivezivezy amin'ireo mpandoa hetra
Kongresy manome 25 taona ny NASA mba hametrahana ny olona amin'ny Mars
Bill dia handratra ny fiarovana sivily amin'ny fiarovan-tena
Famotehana ny fanalàna ny marijuana
Inona no ataon'ny mpanao fanisam-bahoaka amerikana?
Fifidianana filoham-pirenena miteraka resa-
Mpikambana ao amin'ny kaongresin'ny Berk
Ady lehibe faharoa: Ranomasimbe Indiana
Ahoana no Hihaonana amin'ny Kongresy Manoloana Anao?
Olona 20 no voavonjy izay mety hampiasana fanampiana kely, azafady
Amin'ny fampiasana ny matoanteny Verb 'Ver' sy 'Mirar'
Hallmark, Company Christmas ornament
Ny Lalao Olaimpika ao Rio de Janeiro, Brezila
Manana tsiron-kisoa ve ny endômerika?
Inona no maha-zava-dehibe ny simia amin'ny fiainana andavanandro?
Ny Kristianisma Kristiana Ray Boltz dia mivoaka, hoy izy, miaina fiainana mahazatra Gay
Famoronana izao tontolo izao amin'ny anganongano Norveziana
Famaritana momba ny Chemistry Glossary Famaritana ny Ion
Tokony haka kilasy famerenana mitsidika ve ianao?
Fitsipi-pitondran-tena sy fitondran-tena
Lesona Grammar: Famerenana henjana
Top Accessories ho an'ny mpandeha bisikileta
Inona no atao hoe "Niche" amin'ny teny biolojika?
Fomba fijerin'ireo mpikaroka ny famolavolana ny fambolena amin'ny fiovan'ny toetrandro
Ahoana ny fomba fametrahana ny fluorescent na ny kintana nônô?
Famokarana saribakoly sy sary
Ireo mpandresy tamin'ny pastin'ny Sugar Sugar
Cosmos 10 Fahitana ny asa atao
Fomba ahoana no hampivoarana ny soso-kevitry ny valin'ny baolina kitra?
Hunter S. Thompson Teny nalaina
Ahoana ny fiasan'ny Glow Stick Colours